Dhageyso:Mujaahidiinta Al-Shabaab Oo Lacago Kumannaan Dolar Ah Ku Ku Bixiyay Tartan Qur'aan Aqris Ah.
Wednesday July 23, 2014 - 19:42:58 in Wararka by Super Admin
Tartan Qur'aan aqris ah oo dhex marayay arday ka kala socota wilaayaadka islaamiga ah ayaa lagu soo gunaanaday magaalada Baar-dheere ee gobolka Gedo.
Munaasabad aad u qiimo badan oo lagu maamuusayay xiritaanka tartanka ayaa ka dhacday magaalada Baardheere taasoo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo uu kamid yahay Sh/Fu’aad Maxamad Khalaf iyo waaliga gobolka Sh/Cabdiraxmaan Sayid.
Lacago iyo hadiyado qaali ah ayaa waxaa munaasabadda lagu gudoon siiyay dhammaan ardaydii ku tartantay kalaamka Allaah, khaas ahaan ardaydii kaalimaha gashay ayaa la maamuusay.
Ardaydii ku tartantay sodonka jus ee Qur’aanka ayaa waxaa kaalinta kowaad ka galay Cabdi Nuur Aadan Nuur oo ka socday wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool, wuxuu abaal marin u helay lacag dhan 1000 $ (kun dolar) iyo hadiyado kale.
Waxaa kaalinta labaad galay Maxamuud Cabdulxakiim oo u tartamayay gobolka Sh/hoose kaasoo isna la gudoonsiiyay 900 $ (sagaal boqol oo dolar) iyo hadiyado kale, halka kaalinta sadaxaad uu galay Cabdulxakiim Maxamad Aadam oo ka socday wilaayada Jubooyinka, wuxuu helay 700 $ (todobo boqol oo dolar).
Sidoo kale waxaa abaal marino la gudoon siiyay ardaydii ku tartantay 15-ka jus ee Qur’aanka kuwaasoo uu kaalinta kowaad ka galay arday ka socday wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdulxakiim waxaa la gudoonsiiyay lacag dhan 800 $ (sideed boqol oo dolar).
Waxaa isna kaalinta labaad ee 15-ka jus galay Cabdullaahi Macallim Xuseyn oo u tartamayay wilaayada islaamiga ah ee Hiiraan, waxaana la gudoon siiyay lacag dhan 700 $ (todobo boqol oo dolar) halka kaalinta sadaxaad uu galay arday ka socday Jubooyinka oo lagu magacaabo Cabdisayid Cali oo la gudoon siiyay 500 $ (shan boqol oo dolar).
Sidoo kale waxaa munaasabadda lagu abaal mariyay ardayda aan kaalimaha galin kuwaas oo si weyn looga farxiyay. Odayaal dhaqameedyo iyo marti sharaf ka qeyb galay munaasabadda ayaa Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab uga mahad celiyay sida ay dhaqaalahan ugu bixisay Qur’aanka kariimka ah.
Halkan Ka Degso Sida Kaalimaha Loo Kala Galay Oo Faah Faahsan